Kaddib kaarkii casaa ee xalay, maka warqabtaa in Barcelona ay 12-kulan….? – Gool FM
Kaddib kaarkii casaa ee xalay, maka warqabtaa in Barcelona ay 12-kulan….?
(Catalonia) 01 Maajo 2012. Kaddib kaarkii casaa ee loo taagay Heiko Westermann ciyaartii xalay ee Real Betis iyo Barcelona ee ka dhacday Estadio Bento Villamarin, Catalans ayaa iminka ciyaartay 12-kulan iyadoo kooxda ka soo horjeeda laacib laga saaray ama roose laga siiyay.
Kooxda lagu naaneyso Blaugrana ayaana faa’iido wayn ku qabtay arrinkan oo waxay guuleysatay 9 ka mid ah 12-ka kulan ee loo gacmo qabtay kooxaha ka soo horjeeda.
Kulamada kaliya ay Barcelona adkaan waysay xilli ciyaareedkan iyadoo roose loo taagay kooxda ka soo horjeeda ayaa waxay ahaayeen guul darradii ka soo gaadhay Real Madrid 2-1 iyo ciyaartii ay bar-baraha 2-2 la dhaafi waayeen Villarreal.
Kulamada ay Barca guulaha gaartay iyadoo ay naaqis yihiin kuwa ka soo horjeeda ayaa waxaa ka mid ah Rayo Vallecano, Real Madrid lugtii hore ee El Clasico, Athletic Bilbao iyo Atletico Madrid, kuwa ay guul darrooyinka xoogan dusha u saariyeen ayaa waxaa ka mid ah Espanyol iyo Valencia, kooxda dambe ee lagu naaneyso Los Che ayaa waxaa 7-gool ka dhalisay Barcelona oo ku ciyaareysay 11-qofood iyana ay ku ciyaarayeen naaqus maadaama ay qaateen kaarka cas.
TOOS u daawo: Swansea City vs Liverpool - LIVE (Shaxda sugan)
SAWIRRO: Cristiano Ronaldo oo dib ugu soo laabtay tababarka Real Madrid